May 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 May 31, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 10 10-1441 …
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Ka qeyb Qaado Dhismaha Masjidka Al-Hudaa.(Daawo)
Masjidka Al-hudaa oo ku yaala degmada Saakow ee Jubbada dhexe waxaa ka socda howlo dhismo oo lagu ballaarinayo masjidka, kadib markii ay kordheen dadka ku tukada salaadaha. Gudiga dhismaha Masjidka ayaa sheegaya in ay hayaan qarash…
Shantii maalmood ee lasoo dhaafayj, kolonyo ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah ayaa ku safraya wadada xiriirsa Bardaale iyo Qansaxdheere oo katirsan gobolka Baay, kuwaas oo sida sahay ciidan oo loo wado Itoobiyaan jooga Qansaxdheere.…
Maxkamad Islaami ah Oo Xukun dil ah ku fulisay Nin Sixroole ahaa.
Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay xukun dil toogasho ah oo ay riday, islamarkaana fulisay maxkamadda islaamiga ee wilaayada Shabeellaha Hoose. Fagaare ku yaala deegaan hoostaga degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa…
Dilal ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in dilal qorsheysan oo loo geystay xubno katirsan dowladda federaalka ay saacadihii lasoo dhaafay ka dheceen gudaha Muqdisho. Degmada Wadajir ee Muqdisho, waxaa…
Axmad	 May 30, 2020 1
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 09 10-1441…
Axmad	 May 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa sabti taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkaan ka dhegeyso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…